မခဈြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါလဲ လကျလှတျပေးလိုကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့ - ONE DAILY MEDIA
ကိုယျ့ကို ခဈြလားဆိုတော့လဲ မခဈြပဲ လကျတှလေဲ လှတျမပေးခဲ့ဘူး …
ဒီလိုလူမြိုးတှဟော တကယျကို ရှိပါတယျ … သူတို့က သိပျအခဈြခံခငျြကွတာ ဒါပမေယျ့ ခဈြပေးတဲ့သူကိုကြ တနျဖိုးတှမေထားတတျကွဘူး သူ့ကို ဂရုစိုကျပေးရမယျ သူကတော့ ဂရုစိုကျခငျြမှ စိုကျမယျဆိုတဲ့အခြိုးတှနေဲ့ပေါ့ မခဈြနိုငျတော့ရငျ လကျလှတျပေးလိုကျတာ ကောငျးပါတယျ
နားလညျပေးပါဆိုတဲ့ စကားကို အကွိမျကွိမျအခါခါသုံးပမေယျ့လဲ ကြှနျမကို နညျးနညျးလေးမှ နားလညျမပေးခဲ့ဘူးလေ … ဒီနရောမှာ ရပျနရေတာဟာ ကြှနျမအတှကျတော့ သိပျကို မှနျးကပျြလှနျးလှနပွေီလေ … ကိုယျ့ကို ခဈြလားဆိုပွနျတော့လဲ မခဈြပဲ လကျလှတျပေးပါတော့ဆိုပွနျတော့လဲ ကိုယျလှတျလပျသှားမှာ သိပျကွောကျနတေယျထငျပါတယျ
ကိုယျ့မကျြရညျတှဟော သူ့အတ်တကို အရောငျတငျပေးရုံသကျသကျမှနျးသိလာရတယျ ကိုယျပြျောနရေငျ သူမနာလိုတယျလေ . သူ့ကိုပြျောအောငျ ထားခိုငျးပမေယျ့လဲ သူကိုယျတိုငျက ကြှနျမကို ဂရုမစိုကျခဲ့ဘူး တခွားသူတဈယောကျ ဂရုစိုကျမှာကိုလဲ သူနားမလညျဘူး …
အစကတော့ သူ့ကို သိပျခဈြခဲ့ပါတယျ ဒါပမေယျ့ ခုခြိနျမှာတော့ သူ့ကို သိပျကွောကျတာပဲ ကိုယျ့တဈယောကျတညျးကို ကွညျ့တတျတဲ့ သူ့အတ်တကို သိပျကွောကျလာခဲ့တယျ … ဖွဈနိုငျရငျ ကြှနျမ လှတျလပျခငျြနပေါပွီ ပွီးတော့ သိပျကို မှနျးကပျြလှနျးနပွေီလေ …
ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ခဈြတယျဆိုရငျ ဂရုစိုကျပေးဖို့မမပေ့ါနဲ့ မခဈြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါလဲ လကျလှတျပေးလိုကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့ ကိုယျ့ကို ခဈြလဲမခဈြပါပဲ အတ်တတှကွေောငျ့ ဆှဲထားတဲ့လကျတှကေ ကိုယျ့အတှကျ ပိုပွီး ပူလောငျရတယျ …
ကိုယ့်ကို ချစ်လားဆိုတော့လဲ မချစ်ပဲ လက်တွေလဲ လွှတ်မပေးခဲ့ဘူး …
ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ တကယ်ကို ရှိပါတယ် … သူတို့က သိပ်အချစ်ခံချင်ကြတာ ဒါပေမယ့် ချစ်ပေးတဲ့သူကိုကျ တန်ဖိုးတွေမထားတတ်ကြဘူး သူ့ကို ဂရုစိုက်ပေးရမယ် သူကတော့ ဂရုစိုက်ချင်မှ စိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိုးတွေနဲ့ပေါ့ မချစ်နိုင်တော့ရင် လက်လွှတ်ပေးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်
နားလည်ပေးပါဆိုတဲ့ စကားကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါသုံးပေမယ့်လဲ ကျွန်မကို နည်းနည်းလေးမှ နားလည်မပေးခဲ့ဘူးလေ … ဒီနေရာမှာ ရပ်နေရတာဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ်ကို မွန်းကျပ်လွန်းလှနေပြီလေ … ကိုယ့်ကို ချစ်လားဆိုပြန်တော့လဲ မချစ်ပဲ လက်လွှတ်ပေးပါတော့ဆိုပြန်တော့လဲ ကိုယ်လွတ်လပ်သွားမှာ သိပ်ကြောက်နေတယ်ထင်ပါတယ်
ကိုယ့်မျက်ရည်တွေဟာ သူ့အတ္တကို အရောင်တင်ပေးရုံသက်သက်မှန်းသိလာရတယ် ကိုယ်ပျော်နေရင် သူမနာလိုတယ်လေ . သူ့ကိုပျော်အောင် ထားခိုင်းပေမယ့်လဲ သူကိုယ်တိုင်က ကျွန်မကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး တခြားသူတစ်ယောက် ဂရုစိုက်မှာကိုလဲ သူနားမလည်ဘူး …
အစကတော့ သူ့ကို သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ သူ့ကို သိပ်ကြောက်တာပဲ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကို ကြည့်တတ်တဲ့ သူ့အတ္တကို သိပ်ကြောက်လာခဲ့တယ် … ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မ လွတ်လပ်ချင်နေပါပြီ ပြီးတော့ သိပ်ကို မွန်းကျပ်လွန်းနေပြီလေ …
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ဂရုစိုက်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ မချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါလဲ လက်လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်လဲမချစ်ပါပဲ အတ္တတွေကြောင့် ဆွဲထားတဲ့လက်တွေက ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး ပူလောင်ရတယ် …